Ugxeka ukuqashwa kosaziwayo 'ukuhlobisa' - Ilanga News
Home Izindaba Ugxeka ukuqashwa kosaziwayo ‘ukuhlobisa’
Ugxeka ukuqashwa kosaziwayo ‘ukuhlobisa’
UGXEKA ukuqashwa kosaziwayo nama-slay queen emidlalweni kamabonakude ngenxa yodumo umakadebona kwezokulingisa obalwa nabahamba phambili kwiSibaya esidlala kuMzansi Magic (channel 161) ngo-20h30 ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu.
Sekuwumlando ukuthi kuyaphela ngalo mdlalo kule nyanga, okuzoshiya ukhilimu wabalingisi ungenamsebenzi.
UGcina Mkhize (osesithombeni) odlala indawo kaKaMajola oyinkosikazi kasomatekisi, uSamson Ndlovu uthi umkhakha wezokulingisa usudeleleke kakhulu ngenxa yokuqashwa kukanoma ngubani.
“Kuyona yonke into kumele uqale uqeqeshwe ngisho ngabe unobizo. Nesangoma sizalwa sinalo ubizo kodwa siyaqeqeshwa (siyathwasa) ngaphambi kokuba sisebenze abantu. Lokhu okwenziwa yizikhulu ezisiphethe, kuwukwedelela umsebenzi wethu,” kusho uGcina.
Lokhu ukusho ngaphandle kokubalula igama lomuntu. Utshele leli phephandaba ukuthi yize engasitholi kakhulu isikhathi sokubuka umabonakude, kodwa uyazi ukuthi lo mkhuba usuvamile.
Ukhale ngokuthi baningi abantwana abanobizo lokulingisa, baya ezikoleni ukuyoqeqeshwa, kodwa kabasebenzi ngenxa yokuqashwa kosaziwayo.
Uthi uyakuqonda ukuthi abanikazi bemidlalo basuke befuna ukumaketha imidlalo yabo ngokubiza labo abalandelwa kakhulu.
“Okunye wukuthi iningi labaqashi bethu akubona abalingisi, bangosomabhizinisi nje, yingakho kungasho lutho kubona ukulanda osaziwayo ngoba bacabangela ibhizinisi labo,” kusho yena.
Unxuse abantu abanesifiso sokulingisa ukuba bahambe bayoqeqeshwa kuqala, bengamane nje bangene ngodumo kuphela.
“Okunye esilimala ngakho yimali ngoba laba bantu abangawazi umsebenzi, bathatha noma yimalini ngenxa yokuthi kabayiqondi nabo into abayenzayo, okwabo nje wukuvela kumabonakude bese beyaduma, bathole abalandeli abaningi ezinkundleni zokuxhumana,” kusho uGcina.
Phambilini enkulumweni yakhe neLANGA waveza ukudinwa ngabalingisi abangayihambi imidlalo yeshashalazi, wathi kabaqeqeshekile. Uthi ukulingisa kuwubizo, kuyafana nobungoma.
“Uma ubizelwe ekulingiseni kuyacaca ngoba noma ngabe yimuphi umuntu ogqokiswa yena, kuba lula ukuba nguyena ngoba le nto isegazini.
“Yingakho uthola ukuthi omunye umuntu uvela kanye ningaphinde nimbone, yingoba usuke esehluleka wukuba ngomunye umlingiswa,” kusho yena.
Previous articleUbalisa ngokwehliswa isithunzi ‘omuhluzwe umqashi’ epulazini
Next articleIngebhe kuhlabeka iSilo sikaZulu